Mpaghara azụmahịa ndi ozo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ndị ọzọ na-azụ ahịa
Ogologo oge ole ka ego ahụ na-aga WebMoney
Ego ole ka ego na-aga WebMoney N'ozuzu, ozugbo, ma ị nwere ike ịmalite ụjọ na otu ụbọchị. Oge nkwụnye ego na akpa ego WM mgbe ịmaliteghachiri na-adabere na usoro ịmeghachi nke obere akpa. Ndị kasị ...
Biko kọwaa, biko, n'ụzọ doro anya, gịnị bụ ụlọ ọrụ injinịa? Kedu ihe ha na-eme?
Biko kọwaa, biko, n'ụzọ doro anya, gịnị bụ ụlọ ọrụ injinịa? Kedu ihe ha na-eme? Otu ụlọ ọrụ kwesịrị ịmalite ịmịpụta ngwaahịa ọhụrụ, dịka ọmụmaatụ, ọhụụ ọhụrụ. Ụlọ ọrụ na-emepụta agadi anaghị ekwe ya, ma ọ bụ kwe ka akụkụ ụfọdụ ...
Kedụ ihe ị ga-eme maka ndị na - ekekota Ugbo ala Russia nile?
Kedụ ihe ị ga-eme maka ndị na - ekekota Ugbo ala Russia nile? Dabere na Lyubov Lepshkina, m ga-atụgharị òkè nke GDP. AUTOMOBILE ALL-RUSSIAN ALLIANCE OJSC (AVVA OJSC) All-Russian Automobile Alliance OJSC (AVVA OJSC) Open Joint-Stock Company guzobere…
Binarium Ònye nwere ike ịkọ maka saịtị Binarium, ọ bụ ojoo na ònye ga-akwụ ya?
Binarium cannye ga-akọ maka saịtị ọnụọgụ binarium, ọ bụ ojoro na onye ga-enweta ego na ya? N'ebe ọ bụla ebe mbụ ha jụrụ itinye ego na ntanetị - 90% na ịgba alụkwaghịm ka mma nwayọ, mana ...
ọnụọgụ abụọ nhọrọ - ịgba alụkwaghịm ka ọ bụ?
ọnụọgụ abụọ nhọrọ - ịgba alụkwaghịm ka ọ bụ? Nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ otu ihe eji enyere ego aka, nkwekọrịta nke onye na-azụ ahịa ma ọ bụ onye na-ere ahịa na-enweta ikike ịzụta / ree otu mkpụrụ ego na ọnụego azụm ka ọ dị na oge, ekpebiri…
Nye nkọwa nke ike C # 769; ọnụọgụ anụ ahụ, nke bụ otu njirimara nke mmetụta dị n'ahụ ahụ nke ahụ dị iche iche, yana mpaghara. Ike nke a na-etinye aka na nnukwu ahụ na-akpata mgbanwe n'ọsọ ya ma ọ bụ ...
Kedu ihe ịrịba ama nke akụ na ụba ahịa na ọnọdụ nke ịrụ ọrụ?
Kedu ihe bụ ihe ịrịba ama nke akụ na ụba ahịa na ọnọdụ maka ịrụ ọrụ? O nwere ihe ndị na-esonụ: 1) ...
Gwa m 10 nkọwa maka okwu ahịa site n'aka ndị edemede dị iche iche
Gwa 10 nkọwa nke okwu Marketing site n'aka ndị edemede dị iche iche N'akwụkwọ ahụ, e nwere ọtụtụ nkọwa nke ahịa: Ịzụ ahịa bụ ụdị ọrụ mmadụ na-eme iji gboo mkpa na ihe ndị dị mkpa site na mgbanwe. (Philippe Kotler) ...
Akwụkwọ edemede nke Obi Ụtọ PFR: State Criminal Code na VEB CC
Akwụkwọ edemede nke obi ụtọ PFR: STATE CC na VEB UK Gịnị dị iche iche ka ala anyị ka na-eduhie anyị ma na-ahapụ ma akwụghị ego, n'ihi ya ọ bụ na nne na nna anyị na nne na nna ha, ...
Ego ole ka onye ahịa na-enweta?
Ego ole ka onye ahịa na-enweta? Ị nwere ike, mee dị ka ndị a: were 1 nde dolla, kesaa nkwụnye ego na 1000 dollar, wepụ ihe niile maka afọ iri. Mgbe ahụ, ị ​​na-etinye 100 ahịa na forex na ...
Kedu ihe bụ nguzozi?
Kedu ihe bụ nguzozi? Ịkwụ ụgwọ ego na akaụntụ ahụ na-acha uhie uhie ma ọ bụ na nwa Equilibrium, na-edozi ... Usoro nke ihe na-egosi njirimara ma ọ bụ nha na ihe na-agbanwe agbanwe mgbe nile.
Achọrọ m nkọwa ọrụ maka onye ọkwọ ụgbọala SMP
Achọrọ m nkọwa ọrụ nke onye ọkwọ ụgbọ ala nke NSR ... echere m na kagbuo serfdom karịa 100 afọ gara aga, enwere m mmasị na ikike)))) Onye nwere ọrụ maka izu ohi nke ngwaọrụ site na ụgbọ ala mgbe ị na-ebugharị onye ọrịa, ...
Classlọ ahịa Azụmaahịa A "A". Nke a bụ ihe, kedu ka o si dị iche na klas "B" ???
Classlọ ahịa Azụmaahịa A "A". Nke a bụ ihe, kedu ka o si dị iche na klas "B" ??? Udi A n’etiti azumahia azumahia nke ulo a na achoro ime ihe ndi a.
3 $ ole ka rubles?
3 $ ego ole na rubles? 218, 79 $ 3 - ego ole bụ na rubles? Banklọ akụ etiti nke Russia Federation na June 11, 2011. 1 USD ($ - US dollar) = 27,7907 RUIB ...
Kedu ihe bụ nkọwa nke azụmahịa
Kedu ihe bụ nkọwa nke azụmaahịa? Dị ka otu n'ime akwụkwọ ọkọwa okwu nke asụsụ Russian n'oge a, ụlọ ọrụ bụ ihe enyemaka, yana ike na ihe bara uru. N'akwụkwọ ọkọwa okwu nke V. Dahl, onye na-eme nchọpụta bụ onye na-eme ihe ike, nke na-emepụta ihe na onye na-emepụta ihe, ...
Kedu àgwà? Gwa m biko gịnị ka àgwà pụtara?
Kedu àgwà? Gwa m biko gịnị ka àgwà pụtara? Ka anyị gwa. Ogo bu udi ihe akuku nke eji eme ihe iji gboo mkpa maka ikwe ihe na nzube nke ngwaahịa a. E kwuwerị, ngwaahịa ọ bụla bụ nchịkọta ihe, ...
Achọrọ m ịmalite ịzụ ahịa na nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Onye na-ahọrọ onye ahịa ahia Olympus Trade. Kedu ka o si bụrụ? Ònye na-ere ahịa?
Achọrọ m ịmalite ịzụ ahịa na nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Onye na-ahọrọ onye ahịa ahia Olympus Trade. Kedu ka o si bụrụ? Ònye na-ere ahịa? Ịgba alụkwaghịm. Ị na-ebuli nzọ ahụ ma ihe niile yiri ka ọ bụ nkịtị ma na-esote na njedebe nke nzọ gị ...
otu esi wepu nyocha ndi na-adighi mma banyere ulo oru m?
otu esi wepu nyocha ndi na-adighi mma banyere ulo oru m? Ozi na Ịntanetị bụ ihe mgbagwoju anya. Gbalịa ka ị ghara imepụta echiche ọjọọ banyere onwe gị. Nke ahụ bụ ihe nzuzo dum =) M nụrụ na ugbu a ị nwere ike ịtụ ...
Skerbank ahia ahia. Enwere m onye ahịa nke Sberbank, olee otu m ga-esi azụ ahịa na ya na mgbanwe ahụ?
Skerbank ahia ahia. Enwere m onye ahịa nke Sberbank, olee otu m ga-esi azụ ahịa na ya na mgbanwe ahụ? E kere ụlọ akụ iji tụfuo ego. Sberbank enweghị ebe obibi ya, ya bụ, ahia ...
Ngalaba na-akwụ ụgwọ ọrụ
Okwu a na-arụ ọrụ Ụgwọ ọrụ bụ ụgwọ ndị ejikọtara na iji ihe mgbazinye. Ihe ederede doro anya nke mmefu ego ndị a abụghị iwu. A na-ekpebi ihe ha na-eme iji kọwaa ihe ọ bụla mgbazinye. Ugwo maka ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,393.